Best Way To kuzvichenesa zvikadaro Mazino | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino"
kuzvichenesa zvikadaro meno , Mazino rakanga rachena zvishandiso , Zino rakanga rachena zvinogadzirwa
Kuwana yakaisvonaka kupenyerera mazino ari hope anenge munhu wose uye zvichida Iwewo. Kana mazino enyu arambe yero kana chakaremara kunyange pashure kugara Kukwesha pamwe mushonga wemazino chakanaka, ungafanira kushandisa chero pamusoro pakaunda mazino zviitwe Kits nguva dzose. Pane boka nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino pamusika uyewo paIndaneti unogona vasarudze. zvisinei, vose havana kushanda zvakafanana mune rakanga rachena mazino. Best nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino basa nani uye dzichimhanya, apo kbps zvigadzirwa kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino vasingadaro. Kushandisa Generic mazino zviitwe Kits akadai muromo zviumbwe, rakanga rachena nengirozi, rakanga rachena micheka iri nzira yakanaka kuita mazino ako akachena, asi Kits dzakadaro kazhinji kusiya divi zvinokonzerwa. Ndokusaka vanhu vakawanda havadi kushandisa Kits dzakadaro. Kana uri mumwe wavo zvino unogona vasarudze musha mazino rakanga rachena zvakadaro nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino nokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva uye nokutsanya mugumisiro.
Pane zvikonzero zvakawanda, izvo zvinogona kuita kuti mazino enyu rakabuda ruvara. kusvuta midzanga, kutsenga fodya, vachinwa waini tsvuku, mushaba, tea kofi kunogona kuita mazino rakabuda ruvara. saka, kuti mazino enyu akachena, unofanira kurega miitiro yakadaro kutanga. The kwomuzvarirwo kukwegura uye vamwe mishonga sesimbi zvokuwedzera, vhitamini zvokuwedzera, uye vamwe mishonga kunogonawo kukanganisa ruvara kwemeno. Heino mimwe nyore, nokukurumidza uye yakanakisisa nzira kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino mishonga.
Best nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino
Unogona kushandisa musha mazino rakanga rachena chigadzirwa vari nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino kuti mazino akachena. chigadzirwa akadaro chipa uye nyore kushandisa. Uyezve, unogona kushandisa zvigadzirwa zvakadaro pasina kuenda chero nyanzvi chiremba wemazino. Kazhinji A musha mazino rakanga rachena Kit kunouya zviitwe rinoparadza uye muromo Ngirozi. Unofanira kuisa ichi yakanakisisa nzira kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino zvinogadzirwa sezvo rinotungamirirwa pamusoro mazino enyu nani mugumisiro. Kana uchida zvikuru aitarisirwa mugumisiro, Unofanira kuchengeta zvigadzirwa akaisa pamusoro mazino ako asati arara usiku, nokuti dzinenge 10 maminitsi. Munofanirawo kuzvishandisa nguva dzose.
Chimwe zvakanaka asi chinodhura nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino nzira iri kushanyira chiremba wemazino kuti kamuri. Ndiwo uchitsanya nzira yakanakisisa mazino zviitwe. A wemazino Kazhinji awana achibatsirwa mazino bleaching Kit, Laser chiedza meno nengirozi akadurura mumuromo tireyi (inofanira kupfekwa asati arara) kuti meno murwere akachena. A nyanzvi mazino rakanga rachena kurapwa kungadya imi kumwe pakati 250 USD uye 900 USD. Kunyange zvazvo zviri inodhura kwazvo, asi rinopa uye kutsungirira mugumisiro.
Unogona kushandisa musha mazino rakanga rachena zvinhu kuti vari nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino kuti mazino enyu kuremara-vakasununguka. Unogona kushandisa kubikira pasoda uye uyewo rehydrogen peroxide kuti mazino enyu akachena. Vose ndezvipi bleaching yomuchipatara inobatsira muno mazino. The kubikira mushaba iri hasha zvakasikwa uye nokudaro kunobatsira kubvisa echitema uye tartars. Unogona kushandisa navo yoga kana pamwe chete nokuita namatidza yakanaka vavo. Unogonawo kusasa kwekushinywa kubikira pasoda pamusoro mushonga wemazino apo kwokugeza mazino.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:21 AM
Categories: Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tips Tags: nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino, chiremba wemazino kuti kamuri, mazino bleaching Kit, mazino zviitwe, Zino rakanga rachena zvinogadzirwa, kuzvichenesa zvikadaro meno